राजकुमारी मोनाको Sharlen - राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय को पत्नी
पक्कै पनि Sharlin Uittstok, सबै सेतो घोडा मा एक राजकुमार मेरो बाल्यकाल सपनामा बालिका जस्तै। र अब उनको सपना साकार भएको छ। आज यो मोनाको को राजकुमारी छ। Charlene एक highborn परिवार मा जन्मेका हुन सम्मान थियो, तर भाग्य त्यो दुनिया मा अमीर देशहरूको एक एक राजकुमारी भए यो हुनेछ।
Charlene, मोनाको को राजकुमारी, 1978 मा जिम्बाब्वे मा अफ्रिकी महादेशमा मा जन्म भएको थियो। उनको आमाबाबुले युरोप बाट आप्रवासी थिए र क्याथोलिक धर्म भनौदाहरूले। बुबा माइकल K. Wittstock कम्प्युटरमा कम्पनी मा एक प्रबन्धक थियो, र आफ्नो आमा Lynette Wittstock - प्रशिक्षक पौडिरहेका। शायद छोरी एक आमाले एक लामो समय को लागि पौडी खेल्न सिकाउनुभयो र उनको साथ काम जस्तै हिंड्न थाल्नुभयो। 18 को उमेर द्वारा त्यो खेल पुरस्कार धेरै पहिले नै थियो। यो समय परिवार दक्षिण अफ्रीका बस्न सारियो र charlene पौडी मा राष्ट्रिय च्याम्पियन को शीर्षक जित्यो छ। चार वर्ष पछि त्यो भाग सिडनी ओलम्पिक मा देश को राष्ट्रिय टोली थियो, तर कुनै पनि महत्वपूर्ण परिणाम बिना (5 औँ स्थान)। 2000 मा, मोनाको मा घटना को समयमा, त्यो 2002 मा राजकुमार अल्बर्ट र charlene को सिंहासन गर्न हकदार भेटे पौडी मा च्याम्पियन भयो। अल्बर्ट, यो समय मोनाको को राजकुमार भएका थिए जो संग दोस्रो बैठक इटाली ओलम्पिक खेल को उद्घाटन मा, 2006 मा भयो। चार वर्ष पछि, तिनीहरूले आधिकारिक आफ्नो betrothal घोषणा। पछि वर्ष charlene मोनाको बसिरहेको थियो। त्यो फ्रान्सेली भाषा र पनि क्षेत्रीय भाषा मोनाको अध्ययन गर्न थाले। शीर्ष प्रशिक्षकहरु शिष्टाचार बेहोरा भविष्य राजकुमारी honed। त्यो राजकूमारद्घारा शासित राज्य मा पहिलो व्यक्ति भएका थिए पछि, विश्वभरिबाट, आफ्नो दरबारमा Royals लिनुको धेरै सामाजिक घटनाहरू, आदि देखिने भविष्यमा राजकुमारी मोनाको Sharlen र जीनस को राजकुमार अल्बर्ट Grimaldi ब्रिटिश क्राउन प्रिन्स विलियम र Keyt Middlton को विवाह समारोह मा देखा पर्नुभएका संलग्नता पछि एक वर्ष। दुई महिना बितिसकेको र विवाह फेरि। यो समयमा सारा संसार मोनाको मा एक भव्य विवाह लागि भेला भए।
सुरुचिपूर्ण लगातार र आकर्षक: आफ्नो 33 वर्ष मा विवाह एघारौँ भविष्य राजकुमारी मोनाको Sharlen दिन मा एक राजकुमारी जस्तै देख्यो। धेरै Grays Kelli, व्यवस्थामा उनको लेट आमा, अल्बर्ट आमा यसलाई तुलना। तैपनि, सबै भन्दा सावधान दर्शकहरूलाई सुन्दर राजकुमारी मोनाको Sharlen (फोटो लेख मा प्रस्तुत छ) केहि dismayed थियो र खुसी हेर्न भएन भनेर याद गरेको हुन सक्छ। पनि 20 वर्ष उनको वरिष्ठ छ जो उनको नयाँ श्रीमान्, एक धेरै मायालु स्वभाव छ भन्ने तथ्यलाई।
कुँआरापन को वर्ष समयमा उहाँले यस्तो ब्रूक्स ढाल, रूपमा socialites पछि हेर्न व्यवस्थित क्लाउडिया Schiffer , र अन्य। साथै, उहाँले पछि तिनीहरूलाई द्वारा अपनाए थिए जो दुई बिहे नभएको छोराछोरी, पिता हो। तर केही छ: बस विवाह अघि, उहाँले तेस्रो बच्चा जसको आमा माग, जन्म भएको थियो डीएनए डेलिभरी को विश्लेषण मा राजकुमार छ। दुलहा जीवन को यो विवरण को सिक्ने, भविष्यमा राजकुमारी मोनाको Sharlen विवाह देखि उम्कन खोजे। तर, नाम Grimaldi को सारा संसार प्रकारको बदनाम गर्ने प्रदर्शनमा अप राखन र छैन, र त्यो एक भारी हृदयले फर्के खातिर, त्यो तल डिब्बामा हिंडे।
बस दुःखको कुरा तिनीहरूले अल्बर्ट डीएनए विश्लेषण को वितरण कारण अवरोध भएको थियो जो आफ्नो सुहागरात, बिताए। तैपनि, राजकुमार र राजकुमारी लगातार सार्वजनिक रूपमा प्रेम मा प्रत्येक अन्य पहिचान र charlene आफ्नो सपना बारेमा थिच्न वार्ता - राजकुमार गर्न हकदार जन्म दिन। तर, पछिल्लो दुई र आधा वर्षको लागि, त्यो गर्भवती प्राप्त गर्न सक्दैन, र यो आफ्नो सम्बन्ध एक बिच्छेद सक्छ।
इङ्गल्याण्ड मा बुर्जुआ क्रान्तिको: मिति, गराउँछ, नतिजा
Soghomon Tehliryan हत्यारा वा मानिसहरूको avenger?
को बर्लिन पर्खाल निर्माण: यो भयो किन
Serpukhov Kremlin: तस्बिर, इतिहास। यो Serpukhov Kremlin जस्तो?
चिनी उत्पादन खुला
अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग अध्ययन। गर्भावस्था को समयमा परीक्षण स्क्रीनिंग
कसरी सही सास फेर्न जबकि पुस-अप: Breathing उपकरण, रहस्य, सल्लाह
MAZ-251 - पर्यटक बस
मांसपेशिहरु: मांसपेशियों को प्रकार, कार्य, उद्देश्य
अर्कह्याङ्गेल्स्क शहर: Talagi हवाई अड्डा
यो दोहोरो-क्षेत्र काउन्टर स्थापना गर्न लाभदायक छ? गणना र स्थापना
प्रयोग को लागि "Thrombotic एसीसी" सङ्केत गर्छ, निर्देशन, समीक्षा
Maykl Dzhey सेतो: एक जीवनी र Filmography